“Kulanka aan la ciyaari doono Chelsea wuxuu inoo noqon doonaa dhiiragalin xoogan”… Pellegrini – Gool FM
“Kulanka aan la ciyaari doono Chelsea wuxuu inoo noqon doonaa dhiiragalin xoogan”… Pellegrini
(Chelsea) 20 Sab 2018. Macalinka reer Chile iyo kooxda West Ham United ee Manuel Pellegrini ayaa xaqiijiyay in kulanka horyaalka Premier League ay kula ciyaari doonaan kooxda Chelsea uu u noqon doono dhiiragalin xoogan kooxdiisa.
Hadaba macalinka kooxda West Ham United ee Manuel Pellegrini oo kasoo muuqday shir jaraa’id ayaa wuxuu ka hadlay kulan Axada ay la ciyaari doonaan Chelsea.
“Suurtagal ma ahan inaan ku bilaabano si wanaagsan sida ay sameesay kooxda Chelsea, waxay soo guuleysteen 5-tii kulan ay kasoo ciyaareen Premier League”.
“Laakiin waxaan isku dayi doonaa inaan ku celino wixii aan sameynay kulankii ugu dambeeyey ee aan soo guuleesanay”.
“Waa kulan derby ah, laakiin sidaas uma xiiso badna, inkastoo London ay leedahay kulamo badan oo derby ah, sababtoo ah waxaa ka dhisan kooxo badan ee waaweyn, waa kulankii ugu horeeyay ee derby ah ee kooxda Chelsea, sidaas darteed kulanka wuxuu inoo noqon doonaa dhiiragalin”.
Mark Clattenburg oo ka warbixiyay fikirkiisa kaga aadan kaarkii roosaha uu qatay Ronaldo kulankii Valencia
Allegri oo codsaday in muuqaal caawiyaha garsoorka VAR loo adeegsado tartanka Champions League